DAUG DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Daug Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Dachshund / Pug ey isku dhafan oo isku dhafan
Sabian the Daug (Dachshund / Pug mix) oo 2 sano jir ah iyo 18 rodol (hooyo, Dachshund iyo aabe, Pug) - milkiilihiisa ayaa leh, 'Aad buu u ciyaaraa wuuna jecel yahay inuu ku dhuuqo. Sabian waa eeygii ugu quruxda badnaa ee aan abid arko oo aan lahaado, wuxuuna u dhaqmaa sida uu ogyahay, sidoo kale. Waa ilaaliye aad u wanaagsan, jecel carruurta wuxuuna si wanaagsan ula shaqeeyaa eyga kale ee Max, oo ah Bulldog Ingiriis ah. Kaliya in lagu daro, sawirkani isaga uma cadaalad samaynayo. Jidhkiisu waa muruq iyo si fiican u le'eg yahay, isagu waa mid qurux badan!
Daug ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Dachshund iyo Baabuur . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
'Sabian waa Daug, isku darka Dachshund / Pug. Sawirkaan, waa 3 jir iyo bar, culeyskiisuna yahay 18 rodol. Sabian waa mid aad u ciyaar badan, daacad ah oo jecel inuu salaaxo oo daawado TV-ga (isla waqtigaas). Aad buu uqurux badan yahay waxaan ugu yeeraa 'maskaxdayda hidde'. Sabian waa badan 'daug' oo ku jira xirmo yar. '
Astro the Daug oo jira 1 sano-hooyadiis waa pug madow aabihiisna waa Dachshund. 'Astro waa eey ugu quruxda badan adduunka. Waan helay markii uu jiray 8 toddobaad. Ninkayga iyo aniga labadaba waxaan isaga jeclaannay daqiiqaddii aan aragnay. Wuxuu jecel yahay tedhishiisa isla markii aan guriga nimaadno wuxuu ordayaa inuu nagu soo dhoweeyo isaga oo teedihiisa afka ku leh, isagoo dabada u ruxaya sida ay u dhaceyso oo kale! Astro waxaa xukuma caloosha. Wuu fariisan doonaa, is rogi doonaa, wuuna ciyaari doonaa, wuxuu dhahayaa fadlan sida uu ku sameynayo sawirka, wuu seexanayaa, wuxuu sameynayaa tabo badan oo yar yar oo loogu talagalay daaweyn iyo sidoo kale wax kasta oo uu doonayo.
Astro the Daug (Dachshund / Pug mix) da'da 1 sano
Astro the Daug (Dachshund / Pug mix) markay tahay 1 sano jir— 'Maxaad haysaa, hooyo?!'
Sam Daug oo 7 bilood jira (Dachshund / Pug mix)
3 bilood jir adhijir Jarmal ah
Zoë the Daug (eeyaha isku dhafka ah ee 'Dachshund / Pug mix') eey ah oo qiyaastii 8 toddobaad jir ah— 'Zoë, ilmahayga ku dhowaad 8-jirka ah ee Daug eey (Dachshund / Pug mix) hooyadu waa Pug yar yar oo nadiif ah, aabuhuna waa daahir, daaha gaaban oo Dachshund ah. Iyadu waa tan ugu yar ee qashinka (waxaa jiray saddex). Iyadu waa qof aad u xiiso badan oo saaxiibtinimo leh sida hooyadeed, laakiin waxay jeceshahay inay seexato oo ku salaaxdo dhabarka sida aabbeheed. '
Zoë the Daug (Dachshund / Pug mix breed) eey yar oo qiyaastii ah 8 toddobaad jir
cocker tzu eeyo yaryar oo iib ah
sida weyn yeela gliders sonkorta heli
sawirada isbaanishka cocker spaniel
Dahab dahab yar yar oo buuxa